"Me Caawimada Talo in la dhiirrigeliyo My manida Trade" (4)
In si kooban u dhigo, shuruucda dalka Nigeria si dhab ah u baaqi at sale ama ganacsiga ee aadanaha, qaybo jidhka, iyo sidoo kale dheecaanka in unkamayaan sida. Waxaan ahay ogyahay in ay jiraan sharci hoosaadyo deeq manida (ku salaysan qabanqaabada inta badan aan la bixin iyo iibka mararka danbe) in qaar ka mid ah dalalka kale, sida Maraykanka iyo wadamada Yurub. In climes sida, sharci hoosaadyo deeq manida xataa wax looga qabto arrimaha sida magdhawga la ogolaan karo ama lacag bixinta, xuquuqda iyo waajibaadka deeq dhinaca farcankiisa noolaha; ilmaha xaq ah in la ogaado ama aqoonsiga aabbeheed, iyo arrimaha nidaamka. Waxay inta badan xaddido tirada uurarka kuwaas oo loo ogol yahay ka keli ah deeq ah ee guud. Tani waxa ay ka dhigtay wax taas oo weli ku jira boqortooyadii reer male ee Nigeria – Diiwaanka A dhexe ee deeq manida.
Out waxaa, nin dhiga manida laga heli karaa sida deeq ah oo dhan lumiyo xuquuqda sharciga iyo kale u talin reer binu noolaha ka shahwada soo saaray. Si kastaba ha ahaatee, gudahood maamulada gaar ah, qaar ka mid ah diyaarinta gaar ah siin karaan meel heshiis on nooc ka mid ah co-waalidnimada. enforceability The heshiisyada sida kala duwan ee ay awood u.
Kuwan oo dhammu waa 'un-Nigerian', oo ma uu xitaa la siin wax kasta oo halkan ku fikiray gudahood mustaqbalka dhow. Sidaas, nooc kasta oo dhalmo dhinac saddexaad ama impregnating qof dumar ah oo khasab ma aha in nin lamaanahaaga galmo yaqaan hubaal kicin doonaa ka badan indhaha brows ee Nigeria.
Waxaan la socdaa in Deeqda shahwada waa ka mamnuuc Islam. Galaya rasmi ah oo diiday isticmaalka shahwad deeq ku salaysan in ay counter waddaa in midnimada galmada xiriirka guurka. Xubno ka mid ah iimaanka this Christian adag qaban in fikradda ah in imannin ee qofka bini'aadamka ah waa iman sabab u ah "midhaha falka naagnimadeeda gaar ah in jacaylka u dhexeeya xaaska". Xataa halkaas oo qaar ka mid ah kooxaha diimaha u muuqdaan in ay 'eegto hab kale' on-deeqidda shahwadda Gaarna sababo bini'aadanimo, rasmi ah, kuwaas oo guud ahaan u ilaaliyaan deeq shahwada in ka dhinac saddexaad weli xadgudub curaarta guurka. Ka mid ah kooxaha diimaha waa dheg ah in "la Eebana wax walba waa suurto gal ah". Fikirka kasta oo maciin bidi bacrin ama dhalmo xisbiga saddexaad, ma aha oo kaliya waxa ay ka tarjumaysaa shaki iyo Gaalnimo ee awoodaha Ilaaha Qaadirkaa, la hadal yar ee impregnating qof dumar ah oo khasab ma aha in nin lammaanahaaga galmada si rasmi ah loo aqoonsan yahay, taas oo ay xiranyihiin dembaajiyey oo karaahiyo.
Iyadoo kor ku xusan la xidhiidha oo keliya Deeqda manida, Anigu garan maayo ee group kasta oo diinta in siinayaa booska ah in arrinta of tallaabo sii, dhagno ganacsiga ee manida. Arrinta waa in aan xitaa lagu soo sheegnay, sida badan kooxahan gudahood si cad u aragto sida la qiyaasi karo. Haddii diinta ka mid ah kuwa hadda door bidaan in snick galay xarumaha bacriminta ujeeddo ah ganacsiga manida 'ma biyo ma qaban', talo aan sida weli "eegno waxa aad diinta ayaa sheegay in ku saabsan ku deeqida shahwada iyo xataa lacag ka bixiya dakhliga".
Talooyin ku saabsan dhiirrigelinta, haddii loo baahdo
Readers ma i fiirsan sida khilaafsan oo siinaya talooyin ku saabsan horumarinta halkan. Waxaan ahay si laba sababood samaynaya. Marka, ilaa ay ku noolaadaan erayadayda on 'wax samaynaya' dhinaca jawaab togan codsiyada soo wacaya 'taas oo keentay in gabal this (fadlan ogow horyaalka); iyo marka labaad, inay isticmaalaan waxa aan halkan u gudbiyo sida prompter ah in hay'adaha fulinta sharciga la xiriira, sida talooyin si dusnaa ganacsiga manida ee biqilka, ka hor waxa uu noqonayaa mid Parma ee. In xididka this, xigashadan ka hore waxaad u qortaa-up, "Darka Suuq: Anshaxa ilmaha sida wax soo saarka "Waa in la ogaadaa: "Sida hab casri ah dambiyada xaddidaysa dhiiri 'sababaynta sida tuug oo kale inay qabsadaan tuug', halka marketing weli mashiinka kala wada dhan dayada ganacsiga, piece tan waxaa loogu tala galay in la dhiiri geliyo kuwa soo gudboonaado mas'uul ka ah baadi goobayeen guys xun u aragto wax 'iyada oo indhaha' ee ka shaqeeya ee sharci darrada ah ... ganacsi, …isticmaalaya marketing sida madal. "
qalab Kuwaas oo ahaa wacyi galin u muuqdaan kuwo iska caadi ah in dhowr dal horumaray marka ay timaado 'daynin dadka kale ogaado' oo ku saabsan maadooyinka ku saabsan bangiyada shahwada iyo arrimaha kale ee la xiriira – internet ah (websites, on-line haayaha search, oo si fiican u yaqaan sida matoorada search "Google", "Bing" ku filnaan doonto safarkooda). Out waxaa, qaata manida la filayo sidoo kale u dhowaan laga yaabaa in a “gaarka ah” ama “faray” deeq by advertising. bixiyaha manida A ayaa meel lagu xayaysiin uu ku “in baahida” websites si fudud heli by hooyooyinka horranteeda. kooxaha Web iyo diiwaannada sidoo kale jira kuwa daryeela.
In Nigeria ah, heerka of sirta lug iyo dambeeyaan sida la arko laga hadlin in meelood ugu, horumarinta ganacsiga shahwada ku ool ah qaadan kartaa foomka of gudbin khiyaano kuwa ka dhigay in laga war hayo Ururka ganacsade manida ee a. Intaas waxaa sii dheer, booqasho uu ku mid ka mid ah xarumaha bacriminta ah shanta hablood ee magaalooyin badan, geysan karto sidii loogu talagalay baaritaan joojiyey ku saabsan samaynta is la heli karo si 'ganacsiga qaar ka mid ah dheecaan'.
Ayadoon oo dhan mid ka mid in uu halkan ka muujiyay, Waxaan aaminsanahay in rabitaanka in ay ku sii Jidadkooda waxaa weli sii socoto, on qayb ka mid ah kuwa u arka inay ganacsi ee shahwada sida 'jidka fudud baxay'. Waa maxay iyagu ma ogsoona in ay gacanta sharciga waa muddo dheer ku filan oo ay weli iyaga qabto gudahood jawi ay u arkaan sida arrin qarsoodi ah. Noocan oo kale ah xataa keenta in ay xiiso (sida waxa ka dhaca movies ah) waayo, wakiilka kasta dhiirrigelinta-doonaya fulinta sharciga, in la dhiira galiyay on dhinaca hakinta kiisaska ganacsiga this ay track.
Be the first to comment on ""Me Caawimada Talo in la dhiirrigeliyo My manida Trade" (4)"